real တကယ့်လူ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသွားအလာကို ၀ ယ်ပါ
အစစ်အမှန်က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များဝယ်ပါ
ကျနော်တို့ကသင့်ရဲ့ site ကိုမှပိုပြီးအသွားအလာရဖို့ရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာငါသိ၏။ တဖန်သင်တို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအရစီမံခန့်ခွဲကြဘူးလျှင်ပင်, သူတို့ကအမှန်တကယ်, စိတ်ဝင်စားက်ဘ်ဆိုက်ဧည့်သည်များသို့ပြောင်းလဲဖို့အဆင်သင့်မဟုတျပါလျှင်အချက်ဘာလဲ
Facebook က / Instagram ကိုအပေါ်တစ်ဦးကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအချို့ကိုသင်အကြိုက်ရနိုင်ပေမယ့်သေချာပေါက်က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာ / ကလစ်ဖို့ပြောင်းပါဘူး - အချိန်နှင့်နောက်တဖန်လူစျေးကွက်ပေါ်မှာရှိသမျှကိုသူတို့ပိုက်ဆံဖြုန်းနှင့်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအနည်းငယ်မျှသာအသွားအလာအရကြည့်ပါ။ ပဲကဲ့သို့သောခြောက်လသို့မဟုတ်ခုနစ်ခုကိန်းဂဏန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်း၏သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်မီးခိုး၌ရှိသောထသွားပါ။
သငျသညျကြော်ငြာအတွက်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြုန်းသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့အကျိုးတူယူပြီးခဲ့သူတစ်ဦး dropshipper, နေပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ကိုအထဲကနားထောင်ကြလော့။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုငျပါသညျ!
ပိုပြီးခဲနှင့်ရောင်းချမှုများအတွက်ပုံသေနည်းအချို့ထင်စေခြင်းငှါ, အတိုင်းရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ကဘာလဲ နောက်ထပ် niche လျာထားသောယာဉ်အသွားအလာ။ သငျသညျထိုသူတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်သို့ရောက်ရှိ၎င်းတို့၏အကြွေးကဒ်များကိုဆွဲထုတ်, သင်ရောင်းနေသောအရာကိုကိုဝယ်ခြင်းငှါအဆင်သင့်နေသောသူဧည့်သည်များလိုအပ်ပါတယ်။
FACEBOOK ၏ FIERY PIT သို့မည်သည့်ငွေကိုမျှမပစ်ပါနှင့်
သန်းနဲ့ချီတဲ့ငွေကိုဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့နောက်ထပ်“ လေ့ကျင့်ခန်း” တစ်ခုထပ်မဝယ်ပါနဲ့။
အချို့သော“ သြဇာညောင်းသူများ” အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းမပြုတော့ပါ
ဒါကြောင့်ပဲဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့၏ niche ဝက်ဘ်ဆိုက်ယာဉ်အသွားအလာလုပ်ငန်းခွင်လျာထားသောပါသလား?
သငျသညျတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးဆိုပါက နယ်ပယ်အသွားအလာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂုရုလို့ခေါ်တဲ့သူကမင်းတို့ကိုဒီအကြောင်းပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းကသူတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အသွားအလာရင်းမြစ်တွေနဲ့ယှဉ်ပြီးသူတို့ရောင်းတဲ့သင်တန်းကနေအမြတ်အစွန်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မယ်။
သို့သော်နယ်ပယ်အသွားအလာပြန်လည်ဦးတည်ချက်ကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုသက်ဆိုင်ရာကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအသွားအလာရတဲ့၏တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုယင်းကြောင့် သင်ရရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များသည်သင်၏စီးပွားရေးသဘောသဘာဝကိုစိတ်ဝင်စားပြီးသူများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသောဖောက်သည်တစ် ဦး သည်မော်တော်ကားဆိုဒ်များမှရည်ညွှန်းသောအသွားအလာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ Pop-အောက်မှာတူသောနည်းစနစ်, စက်သင်ယူမှု algorithms အဖြစ်ကြော်ငြာကွန်ရက်များ၏ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စကနေအစီအစဉ်မီဒီယာဝယ်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုအသုံးချရန်။ Plus အား, ငါတို့ domains များနှင့် niche ၏ကြီးမားသောကြော်ငြာစာရင်းကိုင်ထားပါ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း E-Commerce နှင့် Dropshipping တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အစဉ်အမြဲကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့် R&D ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင်စမ်းသပ်ခြင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များကိုအစဉ်မပြတ်စမ်းသပ်ပြီးပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်သည်။ ရလဒ်? အများဆုံးအသွားအလာကိုတိုက်ရိုက်အသွားအလာဖြစ်နိုင်! နောက်ဆုံးပေါ် AI (Artificially Intelligent) နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သင်၏နယ်ပယ်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောအသွားအလာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းသည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ နည်းပညာပစ္စည်းများကိုရောင်းချသူသည်နည်းပညာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဘလော့ဂ်များမှအသွားအလာရရှိလိမ့်မည်)
အသွားအလာအားလုံးသည်လူ ၁၀၀% နှင့်ပစ်မှတ်ထားသောကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏မြင်သာမှုနှင့်အရောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်
ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်အကွာအဝေးထူးခြားတဲ့ IP မြားမှသငျ့လိုချင်သောတိုင်းပြည်နှင့်နယ်ပယ်မှတိုက်ရိုက်က်ဘ်ဆိုက်ဧည့်သည်များမှအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ၏ကျယ်ပြန့ကိုဖုံးလွှမ်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဗြိတိန်, ဥရောပ, စင္ကာပူႏုိင္ငံအာရှနှင့်အာဖရိက။ 320 နယ်ပယ်စျေးကွက်ကျော်နှင့်အတူငါတို့သည်သင်တို့အရည်အသွေးမြင့်မား, အရှင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့လူကြိုက်များမှုတိုးတက်, traffic ကိုပစ်မှတ်ထားရသေချာအောင်နှင့်ရောင်းအား၏အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးပွားလာ။
သင့်ရဲ့အနားမှာအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ, သင့် website ကပိုပြီးမြင်သာရဖို့ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ ပုံစံဖြည့်စွက်
2 ။ အမေရိကန်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်စေ
3 ။ ထိုင် WE သင့်အတွက်အစစအရာရာပြုရ AS အပန်းဖြေ
သငျသညျကုန်ပစ္စည်းမှာဖြည့်စွက်အမိန့်ပုံစံငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်အားလုံးအသေးစိတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးစွမ်းသည်။ အဲဒါကိုဖြည့်စွက်ဖို့ပဲ 30 စက္ကန့်ကြာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစပျိုးခြင်းမပြုမီကကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်အတူလိုက်နာမှု၌သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုရန်သေချာပါစေ။ စိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေကျနော်တို့ကိုမဆိုစကားဝှက်များအဘို့အသငျသညျမမေးကြဘူး - သင့်ရဲ့ privacy ကိုအကြှနျုပျတို့အားမယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောပါ!
အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းငါတို့သည်သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏တရားဝင်မှုကိုအတည်ပြု - အားလုံးအပြီးကျနော်တို့အပျသညျဟုစစ်ဆင်ရေးကို run ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအဖြစ်ကောင်းစွာ aboveboard ဖြစ်မျှော်လင့်! ဒါကသင့်ရဲ့ site ကိုသဘာဝတွင်အေပျဖွစျဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ သင့်ရဲ့ website မှာပေါ်မှာမဆို, spyware, adware, ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် trojan ပိုးကောင်များရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ သင့်အားဝက်ဘ်ဆိုက်များဤအမြိုးအစားအဘို့အမိန့်နေရာလျှင်, ငါတို့သည်ချသင့်ရဲ့အသွားအလာကမ်ပိန်းကိုပိတျထားပါလိမ့်မယ်, သင်ပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုအကဲဒါဆိုရင်တော့! သငျသညျတောင်းဆိုချက်တင်သွင်းင့်ပြီးတာနဲ့သင်ပြုပိုမိုဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုမှုကို၏ရက်ပေါင်း3မှ4သင်၏အထဲမှာက်ဘ်ဆိုက်မှအသွားအလာကိုမြင်လျှင် start ပါလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့ရ hits အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတစ်ခုစစ်မှန်သောလူ့ဧည့်သည်ဖြစ်အာမခံနေပါသည်!
Niche Online Traffic သည်ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာကွန်ယက်များနှင့်လုပ်ကိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာမိတ်ဖက်များ၏ကြီးမားသောကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ပြီးအမှန်တကယ်လူ့ ၀ က်ဘ်အသွားအလာကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးသူတို့၏ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်နည်းပညာနှင့်ကြော်ငြာတွင်အကြီးမားဆုံးသောနာမည်များဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ် ဦး ချင်းအပါအဝင်ထိပ်တန်းအရည်အချင်းကိုခန့်ထားပါသည်။
ကျနော်တို့စစ်မှန်တဲ့အင်တာနက်လမ်းကြောင်းများအတွက်နံပါတ်တစ်အရင်းအမြစ်နေနှင့် visitors.We အစစ်အမှန်လူ့ကို web traffic ကို၏အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်နှင့်သက်ဆိုင်ရာသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အတွက်မာနထောင်လွှားယူပစ်မှတ်ထား။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Dropshipping, E-Commerce နှင့်အခြားအွန်လိုင်းစီးပွားရေးရှိသည့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် PREFERRED အသွားအလာရင်းမြစ်ဖြစ်စေသည်။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့သည် Shopify, Clickbank, Etsy, Ebay နှင့် Amazon တို့ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းစတိုး ၅၀၀၀၀ ကျော်အတွက်အသွားအလာများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့ - သင့်ကိုဖုံးအုပ်ထားပြီ။
Niche Online Traffic မှအသွားအလာကို ၀ ယ်ခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးတွင်အွန်လိုင်းရှိနေခြင်းကိုသာမကထိရောက်သောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းထိရောက်စွာမြှင့်တင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သငျသညျ niche အွန်လိုင်းယာဉ်အသွားအလာကိုရှေးခယျြပြီးတာနဲ့သင်တို့သည်ငါတို့၏ထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်ရွေးချယ်မှုသင့်ရဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ဘလော့ / အကြောင်းအရာဆိုက်ကိုမှ traffic
အိမ်ခြံမြေ / Real Estate
ချိန်းတွေ့ & ဆက်ဆံရေး
CBD / လျှော်ဆီ
ဒစ်ဂျစ်တယ် / ကို Creative အေဂျင်စီများ
များစွာသောအခြား B2B နှင့် B2C စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
“ Likes” နှင့် No Traffic မျှသာရှိခြင်းသည်ဖျားနာနေသလော။
ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်အသွားအလာအားလုံးစမ်းသပ်ကျွန်ုပ်တို့၏ AI အစနစ်များကိုလေ့လာသင်ယူနှင့် 24 /7ဒါအသွားအလာသက်ဆိုင်ရာနှင့်အရည်အသွေးရုံချင်းစီကဒုတိယဖြတ်သန်းပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။
သငျသညျကိုစလှေတျဧည့်သည်များပြီးသားသင့်ရဲ့ niche စိတ်ဝင်စားနေသောလူများ, စကားပြောဤအရပ်အမြင့်ဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့2ကျော်ဆယ်စုနှစ်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးပါပြီ။ B2B နှင့် B2C စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမရေမတွက်နှစ်ပေါင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအဆစိုက်ပျိုးကြသည်။
ရီးရဲလ် IP Address ကို
Option ကို Targeting niche
၆ လအတွက်နေ့စဉ် Vis ည့်သည် ၂၀၀၊ OR ၁ လအတွက်နေ့စဉ် Vis ည့်သည် ၁၀၀၀
Ultimate SEO ဆိုသည်မှာ
တဲ့ Keyword ရာထူးမြှင့်
ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် SEO ဆိုသည်မှာ
ပြင်ပ SEO ဆိုသည်မှာ
SETH - ကွန်ရက်တည်နေရာပိုင်ရှင်
“ အသစ်သော site အသစ်၏အသွားအလာကိုစမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့်အမှန်တကယ်လူအသွားအလာကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။
လော်ရာ - ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုင်ပိုင်ရှင်
ကျနော်တို့ကဤယောက်ျားတွေသုံးပြီးပြီးနောက်စျေးကြီး FB ကြော်ငြာများသုံးရပ်တန့်ပါပြီ။ စံပြဝန်ဆောင်မှု!
မာ့ခ် - ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်စျေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု
NicheOnlineTraffic တစ်အကျိုးရှိစွာနှင့်တိကျသောထောက်ခံမှုနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသွားအလာလုံးဝလုံခြုံနှင့်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, သင်လိုအပ်အသွားအလာများကို၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ တကယ်ပဲအထင်ကြီး, ငါ့လုပ်ငန်းကိုတိုးတက်မြင့်မားလာနေသည် !.